"Iyo Mhizha" inosangana ne "Zvinoreva Vasikana" mune inotyisa "Givertaker" ipfupi - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau "Iyo Mhizha" inosangana ne "Zvinoreva Vasikana" mune inoshamisa "Anopa" mupfupi
"Iyo Mhizha" inosangana ne "Zvinoreva Vasikana" mune inoshamisa "Anopa" mupfupi
yakanyorwa na Trey Hilburn III October 12, 2016
Chii chisiri kuda nezve mafirimu senge "Iyo Craft" uye "Zvinoreva Vasikana". Rhetorical! Mhinduro yemunhu wese inofanirwa kuve inonzwika "Chinhu chose chakashata!" Arcanum Mifananidzo 'Vakafa Vana Kirabhu inotipa dosi yezvinoita kuti iwo mafirimu maviri ave makuru.
Iyo firimu ipfupi, "Anopa" ndiye wekutanga mumutsara wezvichave zvakarukwa nyaya pamwe nevechidiki zvinotyisa zvinhu uye, nyika inogara ine hutsinye yezvematongerwo enyika epamusoro.
Iye Anopa, uyo akatanga kuFantastic Fest 2016, ipfupi firimu rinotenderedza musikana mudiki akavhura hwindo munzvimbo inoshamisa kuitira kutsiva kune vamwe vaaidzidza navo vakamurwara. Iwindo rinotungamira zvakananga kune Anopa, anoshamisa mweya uyo anopa zvishuwo… pamutengo.
Ipfupi yakanyorwa naPeter S. Hall uye inotungamirwa naPaul Gandersman idosi ine hutano yekushuvira kwezvinhu zvese zvinotyisa uye chesekondari-centric. Iyo poster hunyanzvi naStephen Andrade ndeyekukanda kumashure kune echidiki mabhuku ekutyisa, ayo anounza mundangariro chaiwo Goosebumps kufukidza hunyanzvi.
Arcanum Mifananidzo, yakazvimirira yekugadzira kambani iri muAustin, TX, inoitiswa neyekugadzira duo Peter S. Hall naPaul Gandersman. Pamwe chete vakaburitsa mafirimu ekuti 'My Sucky Teen Romance,' 'Kura, Tony Phillips,' uye 'Hakuzove Nekugara,' pamwe nekafupi kapfupi uye kushambadzira. Basa ravo rekutanga seboka rekutungamira-kunyora ndi'Givertaker, 'firimu ipfupi rakaiswa mukati mepasirese rakakura re' Vakafa Vana Kirabhu. '
Tarisa uone anotyisa Mupi mupfupi pazasi.
Vakafa Vana KirabhuAnoshamisa FestAnopa
Vako Vanodikanwa Vechidiki Cartoon Vanyori Vakashandurwa kuita Monsters!